Alexis Sanchez oo baaqi kusii ahaan doona kooxda Arsenal
Sunday, May 27th, 2018 - 12:36:11
Thursday September 07, 2017 - 09:43:36 in Wararka by MM Shooble
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Chile ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu soo gabagabeeyo seddex sanno oo uu ku sugnaan Waqooyiga London xagaagan ka dib markii uu xiiso waali ah ka helaytababaraha City Pep Guardiola.
Arsenal ayaa la fahamsan yahay inay aqbashay dalab 60 milyan oo ginni ah oo ka yimid Citizens maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga, balse ay wax walba is badaleen, markii la waayay booska bedelka Thomas Lemar, kaasoo go'aansaday inuu sii joogo AS Monaco.
Wenger ayaa qirtay in Arsenal ay qadarineyso Sanchez, madaama uu ku dhow yahay inuu ka tago Emirates Stadium muddo 10 bilood ah oo ah ay kaga hartay qandaraaskiisa uu kugula jira kooxda Arsenal.
Sanchez ayaa hada ku jira sanadka ugu dambeeya ee qandaraaskiisa , waxaad ku bixisaa £ 60m- £ 70m dakhliga, ka dibna dhamaadka xilli ciyaareedka waa inaad ku iibsataa lacag ahceenkaa oo kale ah" ayuu u sheegay beIN Sports. "Sidaas darteed qiimo weyn ayay leedahay, marxaladda qaar waa inaad sameysaa go'aan inaad ku bixiso hal ama labo [ciyaaryahan].
"Waxaan maanta heysanaa 107 ciyaartoy oo England ah oo sannadka ugu dambeeya ee qandaraaskooda ku jira, waana bedel buuxa oo isbeddel ah sida dadku u arkaan xirfadahooda labo sababood oo mid ah, dhamaan ciyaartoyda oo dhan waxay filanayaan mushahar ka sareeya kan ay hada qaataan sababtoo ah waxay filayaan inay sicirbararka ay ka faaiideestaan; sababtoo ah suuqa kala iibsiga ayaa aad u kacay, lakiin kooxuhu ma rabaan inay bixiyaan qiimo aad u sarreeya oo ku saabsan ciyaartoy fiican leh laakiin ma bedeli doonto noloshooda.
"Qadarka lacagta waxaa si buuxda loo xiraa xaqiiqda iyo runta, waxaan idin siinayaa tusaale ahaan: , Dembele sannadkii hore wuxuu ahaa € 15m, sanadkan € 150m. Qeybta kubada cagta ee aadan sameyn karin ciyaaryahan ka tagaya € 15m ilaa € 150m, laakiin xisaabinta u dhaxeysa maalgashiga iyo waxa aad dib u heli kartid waa ay baxeen: Waa kaliya: miyaad awoodi kartaa inaad iibsato ama ma'aha? "
Man City ayaa la filayaa inay Arsenal ku soo bandhigto dalab 20 milyan oo ginni ah oo ay ku dooneyso Sanchez marka suuqa kala iibsiga uu furmo bisha Janaayo.